Madaxtooyada Somaliya Oo Siyaasiyiinta Mucaaradka Uga Digtay Arimaha Ciidamada. – Heemaal News Network
la taliyaha Amniga Qaranka ee Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Cabdi Saciid Muuse ayaa uga digay Siyaasiyiinta mucaaradka ee xildoonka ah inay siyaasadeeyaan Arrimaha Ciidamada.
Isaga oo ka jawaabayay eedeeyn qaar kamid ah siyaasiyiinta mucaaradka oo ay kujiraan Midowga Musharixiinta u jeediyeen Madaxweyne Farmaajo shirka ka socda garoowe ayuu sheegay in Ciidamada dowladda dhamaantood ay yihiin kuwo dalkaan u dhimanaya oo lagu kalsoonaan karo.
Waxaa uu ugu baaqay Siyaasiyiinta xildoonka ah ee rajada ka leh Villa Soomaliya inaysan siyaasadeen arrimaha Ciidamada, isaga oo sheegay in uuuga digayo inay siyaasadeeyaan Ciidamada.
“Markii aan imaaneynay waxaa la odhan jiray waa reer, waa caadi dadka markii ay jago rabaan in la dhaho wa reer laakin yaa dhimanaayo waa ciidanka, marka dowladda Ciidamada xataa hadii ay ka yimaadaan Buuhoodle ama jalalaqsi waan ku kalsoonahay ayuu yiri” la-taliye Cabdi Saciid Muuse.
Hadalka la taliyaha Amniga Qaranka ee Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Cabdi Saciid Muuse ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli inta badan Siyaasiyinta mucaaradka ay Madaxwyene farmaajo ku eedeeyeen in uu Arrimo siyaasadeed u adeegsaday ciidamada kuna weeraro dadka ka aragtida duwan.
Haweeney Dacwad ku Furtay Isbitaal Qalliin Isku-qurxin ku Sameeyey.!!
Xisbiga Waddani Oo si Adag U Dhaliilay Hadalo Uu Jeediyey Madaxweyne Biixi.
Khilaaf Ka Dhex Qarxay Hogaanka Ururka Suxufiyiinta Ee Somaliland Ee Solja.